VPS Terms & Conditions | FXCC
Home / VPS Terms & Conditions
Virtual Private Server ('VPS') momba ny tolotra sy fepetra fanompoana
Alohan'ny hangatahana VPS dia tokony hamaky ny fepetra sy ny fepetra etsy ambany ny mpanjifa ary hahatakatra ny votoatiny.
Fantatry ny mpividy ary manaiky fa:
Ny Virtual Private Server ('VPS') dia tompon'antoka ary tompon'andraikitra avy amin'ny mpandraharaha iray hafa ('BeeksFX') izay misaraka sy tsy miankina amin'ny FXCC.
Ny FXCC dia manome io tolotra VPS io amin'ny 'as is' fototra ary tsy afaka manome antoka fa ny fahafahana dia tsy misy fahadisoana na tsy fahombiazan'ny tolotra.
Ny FXCC dia tsy manaiky ny tompon'andraikitra na ny andraikiny na inona na inona, noho ny fahadisoana na ny fahadisoana amin'ny serivisy VPS anisan'izany, fa tsy voafetra ny fisian'ny fifandraisana amin'ny serasera, ny tsy fahombiazan'ny data na ny fandikan-dalàna.
Ny FXCC dia tsy mifehy ny fanoritana ny VPS na ny fahamendrehany.
Ny FXCC dia tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fivarotana na fahavoazana hafa mety hitranga amin'ny mpanjifa ny fampiasana ny serivisy VPS.
Ny 'Fehezandalàna sy fepetra' dia ampifandraisina amin'ny antoko mandra-pandidiana ny antoko roa.
Ny mpanjifa mitazona VPS dia afaka mamarana ny serivisy amin'ny faran'ny volana kalandrie ary ny fahatarana dia tokony homena farafahakeliny telo (3) andro fiasana alohan'ny faran'ny volana.
Ny FXCC dia miaro ny zo handà, hampiato na hampitsahatra ny serivisy VPS, na amin'ny fotoana inona na amin'ny antony inona, amin'ny fisainan'ny FXCC irery ihany, ary hampahafantatra ny mpanjifa.
Ny mpividy rehetra dia afaka mifidy ny iray (1) VPS na inona na inona ny kaonty mifandraisany amin'ny FXCC.
Ny FXCC dia miaro ny zo hanitsy, indraindray, ny ampahany amin'ny 'Terms and Conditions' araka izay heverina ho ilaina.
Ny mpanome tolotra ('BeeksFX') no seranan-tsambo voalohany ho an'ny olana ara-teknika rehetra.
Ny klioban'ny FXCC miaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto dia afaka mahazo ny FREE SERVICE VPS:
Manaova fametrahana vaovao ary mitazà fitomboana ambany indrindra amin'ny $ 2,500 (na mitovy vola).
Ny volan'ny varotra ambany indrindra isam-bolana 30 isan-kerinandro.
Raha samy tsy voavaly isaky ny isam-bolana ny fepetra 12 (a) sy 12 (b) etsy ambony, dia hamoaka vola $ 30. Raha tsy hoe ny mpanjifa no milaza fa ny FXCC dia tsy ilaina intsony ny tolotra.
Ny saram-pandraiketana rehetra atao amin'ny Service dia atsahatra amin'ny kaontin'ny komity mpanjifa amin'ny fiantombohan'ny volana desambra manaraka.
Amin'ny fanarahana ny fangatahana ny serivisy VPS, dia manaiky avy hatrany ireo fepetra voalaza etsy ambony ianao.